NEW Theme for Phone X APK ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်
ပင်မစာမျက်နှာ » themes » ဖုန်းက X များအတွက်အသစ်အတွက်အဓိကအကြောင်းအရာ
ဖုန်း X ကို APK ကိုများအတွက်အသစ်အတွက်အဓိကအကြောင်းအရာ
လှပသော icon များ, HD ကိုနောက်ခံပုံများနှင့်အပြင်အဆင်တန်ချိန်ပိုင်ဆိုင်စတိုင်သစ်ဖုန်း X ကို OS ကို 11 Theme download လုပ်ပါ။ စတိုင်သစ်ဖုန်း X ကို OS ကို 11 အဓိကအကြောင်းအရာအမြင့်ဆုံးသောချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် stylist OS ကို 11 Theme နှင့် Classy ဖုန်းအသစ် X ကို OS ကို 11 icon များ၏နောက်ခံပုံများနှင့်အတူအသုံးပြုသူတစ်ဦးဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ, သင်ကပြီးပြည့်စုံသောအတှေ့အကွုံကမ်းလှမ်းစဉ်ကသင့်ရဲ့ Android ဖုန်းကိုချောမွေ့နှင့်စမတ်ကို run ပေးနိုင်ပါတယ်။ စတိုင်သစ်ဖုန်း X ကို OS ကို 11 themes များတန်ချိန်တို့တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မဆိုဆောင်ပုဒ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သငျသညျရုပ်ပြ, သိပ္ပံဝတ္ထု, ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်သို့ဖွစျစေ, ငါတို့သည်သင်တို့ချင်အလှဆုံး themes များအပေါငျးတို့သရှိသည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးဆောင်ပုဒ်သည့်အချိန်တွင်မဆို Apply နှင့်သင့်ဖုန်းပေါ်မှာကချွတ်ပြပါ။ အဆိုပါစတိုင်သစ်ဖုန်း X ကို OS ကို 11 ပိုပြီးလှပ themes များပိုင်ဆိုင်ယခု download လုပ်ပါ။
Classy ဖုန်းအသစ် X ကို OS ကို 11 Theme နှင့်ပိုပြီးအံ့သြဖွယ်သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်ကို Download လုပ်ပါ!
HD ကိုနောက်ခံပုံများနှင့်လက်ရာမြောက်သော app ကို icon တွေကိုသင်အစွန်းရောက်အမြင်အပျော်အပါးဆောင်ခဲ့ရမည်။ သငျသညျ 11D themes များနှင့်နှင်းဆီက Galaxy wallpapers.Classy ဖုန်းအသစ် X ကို OS ကို3Theme 11D အထူးသက်ရောက်မှု, 8D ရာသီဥတု widget, လှပရေးရာ app ကို icon များနှင့် Classy နှင့်အတူက Galaxy S3 တစ်ခုက Android ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်နောက်ဆုံးပေါ်စတိုင်သစ်ဖုန်း X ကို OS ကို3Theme ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ် OS ကို 11 Theme နောက်ခံပုံများ။ စတိုင်သစ်ဖုန်း X ကို OS ကို 11 Theme ဒီတော့အပေါ်ကို Samsung S8, Huawei က Mate8 နှင့်အပါအဝင်အများဆုံးအန်းဒရွိုက်ဖုန်းများ, သင့်လျော်သည်။ သင့်ရဲ့ရိုင်းအတွေ့အကြုံကို enable နှင့်သင့်ဖုန်းကိုအေးမြကြည့်ရှုစေရန် Wolf က Spike သွေးဘုရင်ကဆောင်ပုဒ်နှင့်အ 3D launcher Install လုပ်ပါ။
သင်စတိုင်သစ်ဖုန်း X ကို OS ကို 11 ဒေါင်းလုပ်ခြင်းဖြင့်ပိုပြီးအဘယ်အရာကိုရနိုင်မလဲ?
ထိတ်လန့က Black အရောင်နှင့်အတူလှပသောစတိုင်သစ်ဖုန်း X ကို OS ကို 11 သော့ခတ်မျက်နှာပြင်: သင်သော့ခတ်မြင်ကွင်းတက်ပွတ်ဆွဲတစ်ကြိမ်အဆိုပါထိတ်လန့ဝံပုလွေဝေါလ်ပေပါရှိရလိမ့်မည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ privacy ကိုကျော်အပြည့်အဝကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးထားပါတယ်။
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် interface ကို: 3D Motion ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်ပေါင်းစတိုင်သစ်ဖုန်း X ကို OS ကို 11 ဝေါလ်ပေပါနှင့် WWW app ကို icon တွေကိုဘဝကိုရန်သင့်ဖုန်းကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။
theme ရေးစင်တာ: သင်ထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုတစ်ဇိမ်ခံကြည့်ပေးသည်သောပေါ်ပြူလာရွှေဆောင်ပုဒ်အဖြစ်အခမဲ့ themes များအမျိုးမျိုးတို့ကို, ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်သင်သည်လည်းအေးမြ 3D, ဟယ်လိုနှင့်ခရစ္စမတ်အသံ themes များစာရင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အဆိုပါစတိုင်သစ်ဖုန်း X ကို OS ကို3ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူလိုက်နှင့်သင့်ဖုန်းကိုအေးမြကြည့်ရှုစေ 11D သက်ရောက်မှုများစွာ။
စတိုင်သစ်ဖုန်း X ကို OS ကို 11 နောက်ခံပုံများအသက်ရှင်နေထိုင်ပေါင်းအမူအရာ input ကိုအားဖြင့်အစပျိုးကွဲပြားခြားနားသောအထူးတဦးတည်းအတှေ့အကွုံသို့ထိတ်လန့ဝံပုလွေများနှင့်ရိုင်းပေါင်းစည်း။ ဒါဟာသင်စတိုင်သစ်ဖုန်း X ကို OS ကို 11 ၏ဂုဏ်အသရေခံစားရနှင့်သင့်လက်ချောင်းများ၏အစွန်အဖျားမှာအများဆုံးအဆင့်မြင့်မိုဘိုင်းနည်းပညာတွေ့ကြုံခံစားပေးနိုင်ပါတယ်။
စတိုင်သစ်ဖုန်း X ကို OS ကို 11 ကို install မီ, သငျသညျပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ launcher ကို install ဖို့ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ launcher သင်မျိုးစုံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကမ်းလှမ်း:
Locker: ကျနော်တို့ဟာသင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်စမတ် Locker ပူဇော်နှင့်သင့်ဖုန်းကိုသင်တို့အပေါ်မှာလှန်တိုင်း screen ပေါ်မှာသစ်ကိုကြည့်ရှုအောင်, စတိုင်သစ်ဖုန်း X ကို OS ကို 11 နှင့်စတိုင်သစ်ဖုန်း X ကို OS ကို 11 Theme ပေါင်းစပ်ပြီးအားဖြင့်သင်တို့ကိုကိုယ်ပိုင်အမှတ်သညာသော့ခတ်မျက်နှာပြင်ကိုဆက်ကပ်။
စိတ်ကြိုက် themes များ: OS ကို 11, Classy OS ကို 11 Theme နောက်ခံပုံများနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူစတိုင်သစ်ဖုန်း X ကို OS ကို 11 icon များအဘို့သင့် stylist Theme မျှဝေပါ။ သူ့ကို / သူမ၏တစ်ဦးအံ့အားသင့် Give!
အကောင်းဆုံးက Android Themes